Abasebenzi bokhathalelo lwempilo batyakatyiwe yi-COVID yokuLwela izibonelelo zembuyekezo
ngomphathi ku 20-07-21
Kude kube ngoku, abasebenzi kuye kwafuneka baqinisekise ngokuqinisekileyo ukuba bosulelekile emsebenzini. Kodwa amazwe ali-16 ngoku acinga ukubeka uxanduva esibhedlele: Yenza ubungqina bokuba umsebenzi akazange asifumane esi sifo emsebenzini. Enye yezinto ezininzi ezenza isifo se-coronavirus 2019 (COVID-19) ...
I-EPA Greenlights Lysol Disinfectant Spray yokulwa i-COVID-19
I-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA) ivume iLysol Disinfectant Spray yokulwa i-SARS-CoV-2, intsholongwane ebangela isifo se-coronavirus 2019 (COVID-19). I-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA) ivume iLysol Disinfectant Spray yokulwa i-SARS-CoV-2, intsholongwane ebangela i-coronavirus ...
IZibonelelo zoLondolozo eziNobuchule zihlala zisesichengeni kwi-COVID-19
Kukho isidingo esingathethekiyo sokufaka ii-SNF ngezixhobo ezininzi, kungekuphela nje ngezixhobo ezikhuselayo, kodwa nakwizibonelelo ezibalulekileyo zothintelo losulelo kunye nabasebenzi. Ukusukela oko kwaqala ubhubhane we-SARS-CoV-2 / COVID-19 e-United States, sazi ngokubanzi ukuba semngciphekweni ...